Art kurapa uye African kutanga - AFRIKHEPRI
Lanokosha padanho rekugadzira reNegro-Africa rinogara riri pamusoro pekutsvaga iro rakanakisa uye nekuti runako rweAfrica haruna kufanana neGrco-Latin aesthetics i “mimêma tou pantos ”, kutevedzera kwakaipa kwechimiro: hunyanzvi hweAfrica ndehwekufananidzira.
Kutanga kunoda kuti iripo ichenese hukasha hwayo mukutapurirana kwechivanhu chisina kunaka hunhu hwayo kuitira kuti "kuberekwa patsva".
Mune ino iripo kuedza, art art chishandiso chakakodzerwa nerusununguko rwe mweya yedu yakatapwa kubva kuzvinhu kuti tikwanise kupinda mundima yekufananidzira.
Pakutanga kwehunyanzvi hwekurapa sechinhu chekusika, pane chishuwo chekugadzira mafomu kuti azive marimba ekuvepo uye kuti awanikwezvezve kunzwa kwekuvapo kwekuenderera kana (tsika) kusingaperi.
Chokwadi, nzanga dzekutangisa dzinomisa basa remasiki (uye kuomesa) pane kusagadzikana kwekufa kwakapararira pamusoro peboka revanhu parufu rwemutungamiriri waro: "mukuru akafa".
Wokutanga masker ndiye aive nepfungwa yekuvhara etheric chitunha chevakafa muhuni. Zviri nekuziva chiratidzo chekumiririra iye mushakabvu uye nekumusimudza kuchinzvimbo chegumi Ancestor, muchengeti weboka rezvemagariro, kuti wekutanga akatanga kudzora kusagadzikana kwekufa uye akaunza kugadzikana uye tariro mune moyo yevanhu.
Kune Musiki wechiNeggro-mugadziri weAfrica, hunyanzvi zviitiko inzira yekudzamisa kuchema iyo inoperera mukumuka kwekufananidza kwaBaba mune chimiro chechinongedzo chekupikisa.
Chekupedzisira, ideograms iyi inofanira kutorwa sedimikira rekuti tateguru anopenya nemudenga retsika.Chokwadi chinosimbisa kuti mutauro uyo unoguma uchibva kumweya wemweya weiyo ideograms, ndiko kusikwa kwekutanga kweavo echinyakare maAfrican artists anoshanda. muNzvimbo Tsvene Matanda.
Saka kubvira Meroe neIjipita yekare, tsika yeAfrican yakavakirwa pachimiro chekuti munhu haana kuberekwa murume asi iyeye anova mumwe kuburikidza nehurongwa hwekutangisa.
Mhedzisiro yekupedza dambudziko rechisimba inosanganisira kugadzirisa iko kwatateguru weyevanhu Cultural Order.
Akazvarwa muna 1939 muIvory Coast, psychotherapist, mugadziki we psycho-tiba.
African origin of tarot
Chii chinonzi Mbog?
Kubatsira kwezuva mafuta emuchindwe nekuda kwebvudzi uye ganda